Maalinta: Febraayo 6, 2020
Wadada labaad ee laamiga ah, oo laga bilaabay in laga dhiso garoonka diyaaradaha Sabiha Gökçen sanadki 2015, ayaa la qorsheynayaa in la hawl galiyo dhamaadka 2020. 3 kun 500 oo isbarbar dhig ah ayaa loo dhisay garoonka diyaaradaha ee Sabiha Gökçen International Airport, garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul [More ...]
Xubnaha ku guuleysta Rugta Ganacsiga Izmir, Rugta Wershadaha Gobolka Aegean iyo Isdhaafsiga Badeecada Izmir ayaa abaalmarinooda lagu gudoonsiiyay xaflad lagu qabtay Balçova Kaya Thermal Hotel. İZBETON A.Ş, oo ka mid ah kuwa ku xiran degmada Izmir Metropolitan Municipal, kana mid ah kuwa ku guuleysta abaalmarinta. [More ...]
Turkey ayaa mid ka mid ah shabakada ugu dheer wadada ee degmada Şanlıurfa, iyo sidoo kale muwaadiniinta maxaliga ah ee gaadiidka ammaan ah oo raaxo leh si ay u bixiyaan helitaanka qalabka nadaafada. Nadiifinta iyo jeermisyada daraasadaha lagu sameeyay muddooyin cayiman [More ...]
Duqa Magaalada caasimada ee Şanl ​​Metrourfa Zeynel Abidin Beyazgül wuxuu eegay shaqooyinka la taaban karo ee wadada. Waxaan jeclaan lahaa in wadada la taaban karo ay ka shaqeyso isku xirka 25-ka xaafadaha miyiga ee degmada Haliliye oo midba midka kale uu faa'iido yeelan doono, ayuu yiri Duqa Magaalada Beyazgül: [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Ankara, guud ahaan wadooyinka maraya dariiqyada iyo xad-gudubyada xad-dhaafka ah ee ka shaqeeya meelaha taraafikada ee dadku lugeynayaan dhammaan magaalooyinka waaweyn laakiin ku dhaca adeegsiga miyir-la’aanta, burburin ula kac ah iyo soo-saaris tayo liidata. [More ...]
Pendik Metro Construction, Dent, 1 Dhaawac 4 ah oo dhaawacmay
Dhismaha khadka tareenka ee u dhexeeya garoonka diyaaradaha Sabiha Gök Airporten iyo Pendik, ilig ayaa u dhacay sabab aan la garanaynin. Intii ay shilku dhacayeen, barafka xamuulka qaada waxaa saaran shaqaalaha. Dhismaha tunnel-ka Pendik Yayalar Mahallesi ee khadka tareenka, lama oga [More ...]
Maxkamadda Maamulka Labaad ee Sakarya waxay go’aansatay inay joojiso fulinta howshan iyada oo lagu saleynayo in codsigii xero xareynta si sharci darro ah loogu diiday Sapanca ee ku saabsan aagga mashruuca marinka laga dhisi doono. Sakarya Metropolitan oo ah qorshaha guud ee aagga mashruuca [More ...]
Diidmada Sheegasho Soo gudbinta Nidaamka Tareenka Sanliurfa
Qoraalka ay soo saartay Dawladda Hoose ee Magaalada Şanlıurfa, qandaraaska loogu talagalay qandaraaska oo ah 455 milyan oo TL oo wargeys qaran ah ayaa la diiday. Dowlada hoose ee Şanlıurfa Magaalo-weynaha Magaaladda waxaa cinwaan looga dhigay “455 Milyan oo Dacwada Tirada Muuqda” oo lagu daabacay wargeys qaran [More ...]
Özcan Speke oo ku saabsan Wadada Tareenka Tareenka Xawaare Sare ku So socota ee Bolu
Kulankii ugu horreeyay ee Golaha Boliiska Degmada Feebarwari waxaa lagu qabtay hoolka shirarka ee degmada iyadoo uu gudoomiye u yahay degmada Boluun Tanju Özcan. Golaha Magaalada Bolu ee Kalfadhiga 1-aad ee Feebarwari ayaa si toos ah loogu baahiyaa, wax ka baddelka aagagga kulanka [More ...]
RayHaber 06.02.2020 Warbixinta Shirka
Rakibaadda Xarunta Kateydhiga ee KV (TÜVASAŞ)
Shil tareen oo deg deg ah oo ka dhacay Talyaaniga 2 ayaa ku dhintey 30 dhaawac ah
Dalka Talyaaniga, ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay 30 kalena way ku dhaawacmeen shil tareen xawaare sare ku socday. Tareen xawaare sare leh oo ka socda Milan, Italy ilaa Salerno, Livraga Station ee Lodi [More ...]
Imamoglu wuxuu booqday dadkii ku dhaawacmay shilka diyaaradda
muwaadiniinta Guddoomiyaha IMM Ekrem İmamoğlu ku dhaawacmay shil diyaaradeed in ruxmay Turkey ah, wuxuu booqday isbitaalka iyo daweeyey Kartal Pendik. Isagoo la hadlaya dadka dhaawacmay, ayuu yidhi “mamoğlu, "Si dhakhso leh u bogso" dhibanayaasha iyo eheladooda. [More ...]
Madaxa Midowga Xuquuqda Gaadiidka iyo Jid-gooyada Abdullah Peker wuxuu sheegay in awoodaha siyaasadeed oo dhan ay yihiin kuwo aan dan ka aheyn burburka TÜDEMSAŞ ilaa iyo waqtigan. Peker, war-saxaafadeedkiisa, wuxuu ku ballaariyey Warshadaha isla xaaladdan ka jirta gobollada kala duwan. [More ...]
Madaarka Sabiha Gök Airporten wuu ka Baxay Runway! 3 Ku dhimatay 180 Dhaawac ah
Waxaa la sheegay in diyaaradda ay leedahay shirkadda Pegasus Airlines, ee sameysay safarkii Izmir-Istanbul ay isku dayaysay in ay ka degto garoonka Sabiha Gökçen, ay ka tagtay orodka. Waxaa la sheegay in garoonka diyaaradaha si ku meel gaar ah loogu xiray duulimaadyadii shilka kadib. Wasiirka Caafimaadka Fahrettin Koca 180 qof ayaa gabi ahaanba ah [More ...]